Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0512 lat
Ny toetry ny Apostoly (1Tes2:3)
Alatsinainy 30 Jolay
Vakio ny 1 Tes. 2:3. Inona no zava-dehibe tiany hasongadina eto mikasika ny antony manosika hanao zavatra?
Saiky ny rehetra no mahafantatra tamin’ny andro fahiny fa misy tsiambaratelo telo hahazoana mandresy lahatra olona hiova fomba fijery sy fomba fanao. Tsarain’ny olona amin’ny toetr’ilay mpandaha-teny ny herin’ny foto-kevitra entiny (ethos amin’ny fiteny grika), manaraka izany, amin’ny toetr’izany foto-kevitra izany na ny lôjika isehoany (logos), ary farany amin’ny herin’ny fanairany ny fihetseham-po sy ny fahalianan’ny mpihaino azy (pathos). Ao amin’ny 1 Tes. 2:3-6 i Paoly dia mifantoka amin’ny toetry ny apôstôly amin’ny maha-ampahany lehibe izany eo amin’ny fitoriana, izay hitarika fiovana
tanteraka eo amin’ny Tesalônianina.
Asongadin’i Paoly ao amin’ireo andininy ireo ny tsy fitoviana misy eo aminy sy ireo olon-kendry mamim-bahoaka. Tombontsoa manokana mantsy no manosika ireto farany (jereo ny lesona 3). Teny telo no ampiasain’i Paoly ao amin’ny and. 3 hilazana ireo antony tsy izy mety hanosika ny olona hitory na hanao asa fanompoana. Ny voalohany, dia “fitaka”, na fahadisoana eo amin’ny fomba fijerin’ilay mpitory mihitsy. Mety hafana fo mikasika ny hevi-diso anankiray izany mpitory izany. Mety ho tena amin’ny fony marina tokoa no itoriany izany kanefa mamita-tena ihany izy. Mihevitra izy fa manao soa ho an’ny hafa kanefa mbola hevi-diso ihany no manosika azy.
“Fahalotoana” no teny faharoa. Ny olona dia voasarik’ireo olona izay fantatry ny rehetra tsara noho ny fahefany, na ny heviny, na ny zava-bitany. Mety ho ny fahafahana manao firaisana ara-nofo vokatry ny lazany no manosika ireo olo-malaza fanta-bahoaka sasany.
Ny dikan-teny tsara indrindra ho an’ny teny fahatelo kosa dia ilay hoe “soloky”, na “famitahana”. Eo amin’io tranga io, dia fantatr’ilay mpandaha-teny tsara fa diso ny fotokevitra entiny ary tena ezahiny amin’ny fomba manokana mihitsy ny hampivily lalana ny mpihaino azy mba hahazoany tombontsoa.
Tsy nisy tamin’ireo antony voalaza ireo na dia iray aza nanosika an’i Paoly sy i Silasy. Raha izany mantsy, dia tsy maintsy ho nahatonga azy ireo tsy hitory ny filazantsara intsony ny fanandramana vao nolalovany tao Filipy. Ny herin’Andriamanitra niasa tamin’ny alalan’izy ireo no nitarika azy hanana ilay fahasahiana nasehony tao Tesalônika. Anisan’ny nampanan-kery ny filazantsara tao Tesalônika (jereo ny 1 Tes.1:5) ny toetry ny apôstôly, izay namirapiratra teo amin’ny fomba fandaharany hevitra.
Tsy ampy tamin’izany fotoana izany ny fanehoana foto-kevitra araka ny lôjikany sy ny antso manaitra ny fo fotsiny. Ny toetr’izy ireo mihitsy no nifanaraka tamin’ny zavatra nambarany. Ny fahatokiana toy izany dia manan-kery tsy takatry ny saina eto amin’izao tontolo misy antsika izao, tahaka ny tamin’izany fotoana izany koa. Saintsaino ireo antony manosika anao hanao ny zavatra rehetra izay ataonao. Madio ve izany, tsy misy fitaka na koa soloky? Raha tsy araka ny tokony ho izy izany, dia inona no fiovana tokony hatao hampahatsara lavitra izany? Jereo koa ny Deo. 10:16; Fil. 4:13; Sal. 51:1-10.